တဈနတေ့ာ အလုပျပွီးခြိနျ ညခငျးတှမှော မငျးဘာလုပျလဲဆိုတာ က မငျးရဲ့ အနာဂတျကို ဆုံးဖွတျပေးပါလိမျ့မယျ – Shwe Thuta
တဈနတေ့ာ အလုပျပွီးခြိနျ ညခငျးတှမှော မငျးဘာလုပျလဲဆိုတာ က မငျးရဲ့ အနာဂတျကို ဆုံးဖွတျပေးပါလိမျ့မယျ
Shwe Thuta | December 9, 2020 | Knowledge | No Comments
တဈေ န့ကို တဈနာ ရီလောကျ ဒါေ တှလုပျဖို့ အခြိနျပေးလိုကျပါ။ မငျးဘဝွေ ပာငျး လဲပါလိမျ့မယျ။ မငျးရဲ့ အလုပျခြိနျ ညနေ6နာရီမှာ ပွီးပွီးတော့ မငျးက ည သနျးခေါငျ 12 နာရီမှ အိပျရာ ဝငျတ ယျဆိုပါစို့။ ဒီကွား ထဲက6နာရီကို မငျးဘယျလို အသုံးခြ ပါသလဲ? TV ကွညျ့တာလား? တကယျတော့ ဒီအခြိနျကို မငျးဘယျ လိုအသုံးခြ တယျဆိုတာက မငျးထငျ တာထကျ
ပိုအရေးကွီးပါတ ယျလူေ တျာတျောမြားမြား ထငျနတောက ကြှနျေ တျာတို့ career ကို တိုးတတျဖို့ အလုပျခြိနျအတှငျးမှာ ကြှနျတျောတို့ ကွိုးစားအားထုတျ ရမယျလို့ပဲ ထငျနကွေတယျ။ ကြှနျတျော တို့ အနာဂတျနဲ့ အလုပျအကိုငျတှဟော ကြှနျတျော တို့ အလုပျလုပျနတေဲ့ ကုမ်ပဏီနဲ့ ခေါငျးဆောငျအပျေါပဲ မူတညျနတေယျလို့ ထငျနကွေ တယျ။
တကယျလို့ မငျး ကိုယျ့ကိုယျကို ဘဝမှာ တိုးတတျမှုမတှဘေူ့းဆိုရငျတော့ မငျးရဲ့ အလုပျနဲ့ မငျးရဲ့ အလုပျရှငျတှကေို မငျးအပျေါ မွတေောငျမွှောကျမပေးလို့ဆိုပွီး အပွဈတငျ လို့မရပါဘူး ကိုယျ့ကိုယျကို တိုးတ တျအောငျ ပြိုးထောငျဖို့ ဆိုတာ မငျးရဲ့ တာဝနျပါ။ မငျးဟာ မငျးရဲ့ ညခငျးအခြိနျတှကေို ဘယျလိုအသုံးခလြဲဆိုတာဟာ အလှနျအရေွး ကီးပါတယျ။ စာဖတျပါ။ ဘဝမှာ မငျးလို ခငျြတာရဖို့ knowledge က အရေးကွီးပါတယျ။
ဗဟုသုတတှေ စုဆောငျးရပါမယျ။ ဒီလို ဗဟုသုတတှကေို မငျးရဲ့ အလုပျမှာ မငျးရဲ့ ဘဝမှာ ပွနျလညျအသုံးခကြွရပါမညျ တကယျလို့ မငျးက စာဖတျသနျတယျဆိုရငျ မငျးဗဟုသုတေ တှ ပွညျ့ပွီး မငျးရဲ့ စကားပွောတဲ့ ခေါငျးစဉျတှေ အကွောငျးအရာတှေ ပိုပွီးစိတျဝငျစားစရာကောငျးလာပါလိမျ့မယျ။ Anthony Robbins က ပွောပါတယျ။
တကယျလို့ မငျးဟာ တဈနကေို့ တဈနာရီအခြိနျပေးပွီး အကွောငျးအ ရာတဈခုကို လလေ့ာမယျဆိုရငျ တဈနှဈကွာတဲ့အခါမှာ မငျးရမဲ့ knowledge တှကေ ကမ်ဘာ့ လူတှရေဲ့ 99.999 % လောကျထိဖွ ဈပါလိ မျ့မယျတဲ့။ တဈနကေို့ အခြိနျ သုံးဆယျမိ နဈလောကျပဲ စာဖတျခြိနျပေးနိုငျရငျတောငျ တဈနတေ့ဈနေ့ knowledge တှေ အမြားကွီး ရမှာပါ။
မငျး expert မဖွဈဘူး ဆိုရငျတောငျ မငျးရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှထေကျ ပိုပွီး ဗဟုသုတမြားလာမယျဆိုတာ အာမခံနိုငျပါတယျ။ တကယျလို့ မငျးရဲ့ လကျရှိအလုပျက မငျးတကယျစိ တျဝငျစား တဲ့အလုပျမဟုတျ ဘူးဆိုရငျ မငျးဟာ ဒီအခြိနျတှမှော မငျးတကယျစိတျဝငျစားတဲ့အရာတှေ လလေ့ာလို့ရပါတယျ။ ဒီလို ရတဲ့အခြိနျမှာ စိတျဝငျစား တဲ့အရာတှေ လလေ့ာပွီး အခြိနျတဈခုေ ရာကျ တဲ့အခါမှာ မငျးရဲ့ career ကို ပွောငျးလို ကျလို့ရပါလိမျ့မယျ။
start up တဈခု စလိုကျလို့ ရပါတယျ။ project တှေ လုပျဆောငျပါ။ မငျးရဲ့ ဗဟုသုတတှေ စိတျကူးတှကေို ပုံဖျောဖို့ မငျးအလုပျက အခှငျ့အရေးမပေးရငျ မငျးကိုယျတိုငျ ရှာဖှလေု ပျဆောငျပါ။ volunteer project တှေ လုပျနိုငျပါတယျ။ ကိုယျနဲ့ ဝါသနာတူတှနေဲ့ ပေါငျးပွီး အဖှဲ့လိုကျ ပူးပေါငျးလုပျဆော ငျကွညျ့ပေးပါစမျးသ ပျကွညျ့ပါ။ ကိုယျစိတျဝငျစား တဲ့အရာတှေ လလေ့ာပါ။ လကျတှေ့ လုပျဆောငျကွညျ့ပါ။
Network တညျေ ဆာကျပါ။ မငျးရဲ့ အလုပျလမျးကွောငျးမှာ ဖွောငျ့ဖွူးဖို့ strong connection network တဈခု ရှိနဖေို့ လိုပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးမရှိဘူးဆိုရငျတော့ မငျးရဲ့ အခြိနျထဲက ဖဲ့ပွီး လုပျဆောငျရပါလိမျ့မယျ။ အတျောဆုံး မိတျဆှတှေကေို ဆကျသှယျပွီး သူတို့ရဲ့ အကွံဉာဏျတှေ ရယူတာတှေ သတငျးတှေ အခကျြအလကျတှေ ဗဟုသုတတှေ ရအောငျလုပျပါ။ professional life ထဲက
ဆရာကွီးေ တှဆီက လလေ့ာသငျယူကွပါအလုပျက အိမျပွနျရောကျ လို့ ဒီလို ညခမျြးတှမှော အနားယူတယျဆိုပွီး movie ကွညျ့တာ tv ကွညျ့တာ game ကစားတာ social media ပျေါမှာ သူမြားတေ အကွောငျး လိုကျစပျစုနတော အတ ငျးပွောနတော ဒါတှနေဲ့ အခြိနျကုနျဆုံးရတာ အရမျးပြျောစရာကောငျးမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ ဒါတှကေ မငျးရဲ့ အနာဂတျကို ကောငျး မှနျအောငျ လုပျပေးနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
မငျးဘဝရဲ့ အပွောငျးအလဲက ဒီနညေ့က စပါပွီ။6နာရီကနေ ည ၁၂ နာရီထိပါ။ အလုပျပွီးလို့ မငျးအိမျပွနျတယျ။ မငျးဟာ တဈခွားသူတှေ ခိုငျးတဲ့အရာတှကေို လုပျစရာမလို တဲ့အခြိနျပါ။ မငျးရဲ့ အားလ ပျခြိနျပါ။ ဒါကို မငျးဘယျလို အသုံးခမြလဲ?
တစ်ေ န့ကို တစ်နာ ရီလောက် ဒါေ တွလုပ်ဖို့ အချိန်ပေးလိုက်ပါ။ မင်းဘဝြေ ပာင်း လဲပါလိမ့်မယ်။ မင်းရဲ့ အလုပ်ချိန် ညနေ6နာရီမှာ ပြီးပြီးတော့ မင်းက ည သန်းခေါင် 12 နာရီမှ အိပ်ရာ ဝင်တ ယ်ဆိုပါစို့။ ဒီကြား ထဲက6နာရီကို မင်းဘယ်လို အသုံးချ ပါသလဲ? TV ကြည့်တာလား? တကယ်တော့ ဒီအချိန်ကို မင်းဘယ် လိုအသုံးချ တယ်ဆိုတာက မင်းထင် တာထက်
ပိုအရေးကြီးပါတ ယ်လူေ တ်ာတော်များများ ထင်နေတာက ကျွန်ေ တ်ာတို့ career ကို တိုးတတ်ဖို့ အလုပ်ချိန်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားအားထုတ် ရမယ်လို့ပဲ ထင်နေကြတယ်။ ကျွန်တော် တို့ အနာဂတ်နဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေဟာ ကျွန်တော် တို့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ ခေါင်းဆောင်အပေါ်ပဲ မူတည်နေတယ်လို့ ထင်နေကြ တယ်။
တကယ်လို့ မင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘဝမှာ တိုးတတ်မှုမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ မင်းရဲ့ အလုပ်နဲ့ မင်းရဲ့ အလုပ်ရှင်တွေကို မင်းအပေါ် မြေတောင်မြှောက်မပေးလို့ဆိုပြီး အပြစ်တင် လို့မရပါဘူး ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုးတ တ်အောင် ပျိုးထောင်ဖို့ ဆိုတာ မင်းရဲ့ တာဝန်ပါ။ မင်းဟာ မင်းရဲ့ ညခင်းအချိန်တွေကို ဘယ်လိုအသုံးချလဲဆိုတာဟာ အလွန်အရေြး ကီးပါတယ်။ စာဖတ်ပါ။ ဘဝမှာ မင်းလို ချင်တာရဖို့ knowledge က အရေးကြီးပါတယ်။
ဗဟုသုတတွေ စုဆောင်းရပါမယ်။ ဒီလို ဗဟုသုတတွေကို မင်းရဲ့ အလုပ်မှာ မင်းရဲ့ ဘဝမှာ ပြန်လည်အသုံးချကြရပါမည် တကယ်လို့ မင်းက စာဖတ်သန်တယ်ဆိုရင် မင်းဗဟုသုတေ တွ ပြည့်ပြီး မင်းရဲ့ စကားပြောတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေ အကြောင်းအရာတွေ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ Anthony Robbins က ပြောပါတယ်။
တကယ်လို့ မင်းဟာ တစ်နေ့ကို တစ်နာရီအချိန်ပေးပြီး အကြောင်းအ ရာတစ်ခုကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ မင်းရမဲ့ knowledge တွေက ကမ္ဘာ့ လူတွေရဲ့ 99.999 % လောက်ထိဖြ စ်ပါလိ မ့်မယ်တဲ့။ တစ်နေ့ကို အချိန် သုံးဆယ်မိ နစ်လောက်ပဲ စာဖတ်ချိန်ပေးနိုင်ရင်တောင် တစ်နေ့တစ်နေ့ knowledge တွေ အများကြီး ရမှာပါ။
မင်း expert မဖြစ်ဘူး ဆိုရင်တောင် မင်းရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေထက် ပိုပြီး ဗဟုသုတများလာမယ်ဆိုတာ အာမခံနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မင်းရဲ့ လက်ရှိအလုပ်က မင်းတကယ်စိ တ်ဝင်စား တဲ့အလုပ်မဟုတ် ဘူးဆိုရင် မင်းဟာ ဒီအချိန်တွေမှာ မင်းတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေ လေ့လာလို့ရပါတယ်။ ဒီလို ရတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ဝင်စား တဲ့အရာတွေ လေ့လာပြီး အချိန်တစ်ခုေ ရာက် တဲ့အခါမှာ မင်းရဲ့ career ကို ပြောင်းလို က်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
start up တစ်ခု စလိုက်လို့ ရပါတယ်။ project တွေ လုပ်ဆောင်ပါ။ မင်းရဲ့ ဗဟုသုတတွေ စိတ်ကူးတွေကို ပုံဖော်ဖို့ မင်းအလုပ်က အခွင့်အရေးမပေးရင် မင်းကိုယ်တိုင် ရှာဖွေလု ပ်ဆောင်ပါ။ volunteer project တွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ဝါသနာတူတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး အဖွဲ့လိုက် ပူးပေါင်းလုပ်ဆော င်ကြည့်ပေးပါစမ်းသ ပ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စား တဲ့အရာတွေ လေ့လာပါ။ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။
Network တည်ေ ဆာက်ပါ။ မင်းရဲ့ အလုပ်လမ်းကြောင်းမှာ ဖြောင့်ဖြူးဖို့ strong connection network တစ်ခု ရှိနေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ မင်းရဲ့ အချိန်ထဲက ဖဲ့ပြီး လုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ အတော်ဆုံး မိတ်ဆွေတွေကို ဆက်သွယ်ပြီး သူတို့ရဲ့ အကြံဉာဏ်တွေ ရယူတာတွေ သတင်းတွေ အချက်အလက်တွေ ဗဟုသုတတွေ ရအောင်လုပ်ပါ။ professional life ထဲက
ဆရာကြီးေ တွဆီက လေ့လာသင်ယူကြပါအလုပ်က အိမ်ပြန်ရောက် လို့ ဒီလို ညချမ်းတွေမှာ အနားယူတယ်ဆိုပြီး movie ကြည့်တာ tv ကြည့်တာ game ကစားတာ social media ပေါ်မှာ သူများတေ အကြောင်း လိုက်စပ်စုနေတာ အတ င်းပြောနေတာ ဒါတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ဆုံးရတာ အရမ်းပျော်စရာကောင်းမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေက မင်းရဲ့ အနာဂတ်ကို ကောင်း မွန်အောင် လုပ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မင်းဘဝရဲ့ အပြောင်းအလဲက ဒီနေ့ညက စပါပြီ။6နာရီကနေ ည ၁၂ နာရီထိပါ။ အလုပ်ပြီးလို့ မင်းအိမ်ပြန်တယ်။ မင်းဟာ တစ်ခြားသူတွေ ခိုင်းတဲ့အရာတွေကို လုပ်စရာမလို တဲ့အချိန်ပါ။ မင်းရဲ့ အားလ ပ်ချိန်ပါ။ ဒါကို မင်းဘယ်လို အသုံးချမလဲ?
ကံထူးရှငျတိုငျး ဒီပို့ ကိုတှေ့ ခှငျ့ရပွီး ဖတျနိုငျ ရှဲနိုငျပါလိမျ့မညျ …….
ကိုဗဈ Positive လူနာကို စောငျ့ရှောကျဖို့ လူနာစောငျ့ တဈယောကျလိုကျလို့ ရပါပီတဲ့နျော…စညျးကမျးလေးတှေ ကွညျ့လိုကျရအောငျ
အိမျတှငျး ပတျပတျလညျ အတှကျ အံ့သွလောကျစရာ မထငျမှတျထားတဲ့ ဆား ရဲ့အသုံးဝငျပုံ တှေ
“အို” သှေးပိုငျရှငျလေး တှကေို ခဈြသူတျောမယျ ဆိုရငျ သိထားသငျ့တဲ့ အခကျြ(၇)ခကျြ